Shinda dzekusona dzematehwe dzinowanzo kuve dzakasimba tambo dzekusona, dzinosanganisira polyester yakakwira tambo tambo, nylon kukwirira kusimba tambo, nylon yakasungwa tambo uye dehwe yakamonerwa tambo.
Material: MH 100% polyester yakakwirira tenacity yekusonesa shinda inozivikanwawo se tetoron shinda, irworwo rwepolyester shinda yakagadzirwa kubva yakakwira tenacity polyester inoenderera filament.
Feature: Iyo yakapfava yekupedzisa ine yepamusoro yakaderera kukweshera kunoderedza mhedzisiro yekupisa kwetsono uye abrasion, inounza yakanakisa kemikari uye mold / mildew kuramba, musono kusimba, yakanaka abrasion resistance uye kuenderana kusona kuita pamichina yekusona otomatiki.
Nylon High Tenacity Sewing Thread
Material: MH naironi yakakwirira tenacity yekusonesa shinda inonyanya kuumbwa naironi 6 uye naironi 6.6.
Feature: Iine simba rakakwirira, hukuru hwekupfeka-resistant uye corrosion-resistance. Inogona kuchengetedza simba rakajairika munzvimbo dzakaoma uye dzakanyorova.
Material: Nylon yakasungirirwa shinda inogadzirwa ne polyamide 6.6 synthetic fiber, ine zita rakakurumbira rinonzi naironi 6.6 kana 6 synthetic fiber.
Feature: Kuburikidza nekumonyorora faibha, wozonamira nekugadzirisa faibha yese pamwechete kuita imwe, tambo yakasungirirwa haibvi, kwete kupfava, uye inoshingirira kubvongodzwa pakati pekusona.
Polyester yakakwira kusimba tambo Nylon yakakwira kusimba tambo Nylon bond tambo
Yakarongeka yekugadzira nhumbi dzematehwe nhumbi dzematehwe
quilting shangu Shangu
shangu bhegi remukwende bhegi remukwende
nhumbi dzematehwe nhumbi dzemitambo nhumbi dzemitambo
zvekufuga / metiresi zvinhu zvekunze zvinhu zvekunze
kusona bofu upholstery indoor nyoro kushongedza
upholstery / mota cheya
zvigadzirwa zvemaindasitiri / airbags